Xasan Sheekh oo ka hadlay go’aankii maxkamadda ICJ ee kiiska badda (DHAGEYSO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Xasan Sheekh oo ka hadlay go’aankii maxkamadda ICJ ee kiiska badda (DHAGEYSO)
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta shir jaraa’id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay go’aankii shalay ee maxkamadda cadaalada adduunka ee ICJ ay markii seddaxaad dib ugu dhigtay dhageysiga dacwadda badda u dhexeeysa Soomaaliya iyo Kenya.
Wuxuu Xasan Sheekh sheegay dacwada badda ee u dhexeeysa Soomaaliya iyo Kenya inay weli taagan tahay meeshi ay uga tageen 4 sano ka hor, islamarkaana aanay jirin wax isbedel ah oo arrintaasi ku yimid.
Sidoo kale, Xasan Sheekh ayaa sheegay in dacwada badda ay xilligii hore hogaaminayeen qareemo caalami oo Soomaali ah, oo ay ka mid ahayd Muno Sharmaan oo laga saaray, balse aanay dowladdu sheegin cidda lagu bedalay.
Dhinaca kale, Xasan Sheekh ayaa shaki badan ka muujiyay in dowladda federaalka Soomaaliya ay ogolaatay dib u dhigista dacwadda, isagoona ku eedeeyay inay shacabka been u sheegayso, iyadoo tilmamaysa inay dib u dhigista diidanayd.
“Dacwadda badda, 4-sano kahor meeshii aan uga tagnay ayay weli taagan tahay, dacwadda waxaana dib loogu dhigi karaa oo kaliya marka ay labada dal heshiis ku yihiin markii kowaad, labaad iyo seddaxaad waxaa la aqbalay codsiga Kenya oo kaliya, arrintaasi sax mahan, hadii ay jirto oo dowladeenu diidanayd dib u dhigista dacwada caddamaymaha hala wadaagto shacabka hadal kaliya looma baahna” Sidaasi waxaa yiri Xasan Sheekh Maxamuud.
Si kastaba ha ahaatee, hadalka kasoo yeeray madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kusoo beegmaya xilli maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ ay markii seddaxaad dib ugu dhigtay dhageysiga dacwada badda ee u dhexeeysa Soomaaliya iyo Kenya illaa 15-ka bisha March 2021-ka, sababo la xiriira xanuunka safmarka ah ee COVID-19.